UKUSETYENZISWA KWEBOYA KANINZI
ngomphathi ku 21-03-23
Abantu bebesebenzisa uboya amawaka eminyaka. Njengokuba uBill Bryson ephawulile kwincwadi yakhe ethi 'Ekhaya': “… ezona mpahla zokuqala zamaXesha Aphakathi yayinguboya.” Kude kube namhla, uninzi loboya obuvelisiweyo busetyenziselwa impahla. Kodwa ikwasetyenziselwa ...
Kutheni usithi izihlangu zoboya zinganxitywa ngawo onke amaxesha onyaka
Ngelixa besenza izihlangu zethu besicinga ngendalo, yiyo loo nto sikhetha uboya njengesixhobo esiyintloko sendalo yethu. Yeyona nto ilungileyo indalo yethu isinika yona, kuba inezinto ezininzi ezintle: Ulawulo lwe-Thermal. Nokuba yeyiphi na ...
I-TOP 10 FASHION TRENDS ezivela kwi-SPRING / SUMMER 2021 IVEKI ZOKUQALA
Ngelixa ibingunyaka ozolileyo wehlabathi lefashoni, ngeli xesha lonyaka kutyhilwe uyilo olomeleleyo nolunesibindi. Iiblazers ezinkulu neziphetheyo, iibhegi ezingqindilili eziluhlaza, kunye neemaski zobuso ezihonjisiweyo zilawula iiveki zeFashoni kwezi veki zidlulileyo. Kulo nyaka, ezinye zezona zinto zibalulekileyo ...
Iimpawu zombala wentwasahlobo / ihlobo lowama-2021
Intwasahlobo / ihlobo 2021 inokuba yinto enkulu kuthi. Ukudityaniswa kwedijithali kunye netekhnoloji yexesha elizayo, imibala eqaqambileyo iya kuba ngakumbi nangakumbi yobuqu kunye nokufakelwa.Ngobuntu bemibala eqaqambileyo, kukwakho neetoni ezithile eziphakathi.